XOG DAHSOON:warqad uu taliyaaniga qoray oo ka mamnuuceysa beelaha biyomaal iyo gaaljecel in ay xil sare qabtaan#sabab | Xaqiiqonews
XOG DAHSOON:warqad uu taliyaaniga qoray oo ka mamnuuceysa beelaha biyomaal iyo gaaljecel in ay xil sare qabtaan#sabab
Markii uu gumeystihii taliyaaniga uu damcay in uu soo caga dhigto dhulka somaaliya, ayaa beelaha soomaaliya waxa ay bilaabeen in ay iska caabiyaan taliyaaniga.
Beelihii sida aadka ula diriray taliyaaniga waxaa ka mid ahaa beelaha Gaaljecel iyo Biyomaal oo halgan adag ka bilaabay gobolada koonfurta soomaaliya.
Sida taariikhda ku xusan xeebaha koonfureed ee soomaaliya waxaa taliyaaniga kula dagaalamay beesha Biyamaal, waxaana halkankaasi hogaaminayey sheikh mujaahidka ahaa sheikh Cali Maye oo halgan adag taliyaaniga kala hortagay, waxaana ku adgaatay gumeystihii in uu si nabadgalyo ah dhaqdhaqaaq uga sameeyo gobolada xeebaha koonfurta soomaaliya gaar ahaan xeebaha MARKA iyo BARAAWO.
Sheikh geesigga ahaa Xasan Barsane ayaa sidoo kale ka mid ahaa hogaamiyaashiii abaabulay in la iska difaaco gaalada taliyaaniga, waxaa uuna sheeqa la galay taliyaaniga dagaalo caan baxay iyadoo raga ugu badan ee sheikha ka barbardagaalameyey ay ahaayeen beeshiisa .
ABAALMARINTII AY HELEEN BEELAHA BIYAMAAL IYO GAALJECEl
Soomaaliya markii lagu dhawaaqay in ay ka xoroowday gumeystihii ayaa waxaa la sugaayey in loo abaalgudo beelihii halganka adag soo galay hase ahaate badalkeeda beelahaasi halganka galay ayaa la galiyey cunuqabteyn siyaasadeed waxaana arintaasi ka danbeeyey taliyaaniga oo warqad uu qoray oo la dhigay madaxtooyada soomaaliya ku caddeeyey mowqifkiisa ku aadan beelaha Biyamaal iyo Gaaljecel.
Taliyaaniga ayaa madaxada soomaalida ugu hanjabay in hadii ay xil muhiim ah u dhiibaan beelahaasi uu cilqaadka u jari doono taliyaaniga ,waxaana warqaddaasi oo soo gaartay ilaa goordhaw noo xaqiijiyey xildhibaan cabsi sataar sheikh Cabsilaan Sheikh xXasan Barsane oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka.
Hadaba dowladii maxamed Siyaad barre ayaa meel kaga dhacday xusuustii labadan halgamaa waxaana dhacday in sida la ogsoonyahay dowladii siyaad barre ay taalo iyo xusuus u sameeysay dad aan is dhahayo waxa ka mudnaa labadan sheikh.
Dhagaxtuur iyo Xaawo Taako midna kuma dhiman halgan iyo dagaal toona, tusaaale Xaawo Taaako waxa ay dhimatay iyadoo ku jirtay banaabax lagu diidanaa Ingiriiska, waxa ayna xaawo taako ku doodeysay in Taliyaaniga uu ka wanaagsanyahay Ingiriiksa.
Ma jirto sabab ay xaawo taako oo laba gumeysto kala doorbideysay ay kaga haboonaatay in la xuso halgamayaal taariikhdu ingirtay.
Ma jirto sabab keeni karto in la qariyo halgankii reer koonfur iyadoo Axmed gurey ,Sayid maxamed cabdulle xasan iyo waliba dhagaxtuur oo intaba ka soo jeeda beesha daarood la muujiyey taarikhdooda.